အောင်ဒင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၄) - Aung Din
Aung Din - Burmese Regime's Parliament in Perspective (20)
အောင်ဒင် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အဝေးကြည့် အနီးကြည့် စာအုပ်ထွက်ပြီ
အောင်ဒင် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အဝေးကြည့် အနီးကြည့် စာအုပ်ထွက်ပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြည်သူ့ခေတ်ထုတ်ဝေတဲ့ ပြည်သူ့ခေတ် အပတ်စဉ် ဂျာနယ်မှာ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွေအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ မိုးမခကလည်း...
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၄) – Aung Din
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၄) အောင်ဒင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃ (ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၂၉၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၃) ================== နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြရင်ကော အဖြေရှိပါ့မလား...
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၇၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈၊ ၃၂)မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ၃၉ အောင်ဒင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂၊...
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၆၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၃၈) အောင်ဒင်၊ အောက်တိုဘာ...
Interview with Aung Din, Burmese Hluttaw Inside Out … Perspectives
လွှတ်တော်တွင်း လွှတ်တော်ပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုများ အနီးကြည့် အဝေးကြည့် အောင်ဒင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အမေရိကန်ပြည်ရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ဒင်နဲ့ မိုးမခ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသမျှကို...
Aung Din – Regime’s Parliament (37)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၅၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၃၇) အောင်ဒင်၊ အောက်တိုဘာ...
Aung Din – Regime’s Parliament (36)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၄၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၃၆) အောင်ဒင်။ စက်တင်ဘာ...
ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ် (၄) အောင်ဒင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ (ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၂၅၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၃) ကွယ်လွန်သွားသော မြစ်ကြီးများ မြစ်ကြီး...
Aung Din – Irrawaddy Future (2)
ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ် (၂) အောင်ဒင်(ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၂၃၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၃) နှစ်နိုင်ငံစာချုပ်များကို လေးစားလိုက်နာခြင်း ကျနော်ကတော့ နှစ်နိုင်ငံချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်များကို လေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတာ အပြည့်အဝမှန်တယ်မထင်ပါ၊...
Aung Din – The Future of Irrawaddy (1)
(ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၂၇) ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ် (၁) အောင်ဒင် စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ မြစ်ဧရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်ဖျား၊ ကချင်ပြည်နယ်ကဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ မူလအစမှာ မြစ်ဆုံဆည်ကြီး...
Aung Din – Regime Parliament in Perspective (34)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၅၉၊ ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၃၄) အောင်ဒင် အပိုင်း...
Aung Din – Burmese Regime Hluttaw (33)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၅၈၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ( ၃၃) အောင်ဒင်၊...
Aung Din – Regime Parliament (32)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၅၇၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (32) အောင်ဒင်၊ သြဂုတ်...
Aung Din – Maung Maung Gyi
မောင်မောင်ကြီး သို့မဟုတ် အကြွေစောတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဦး အောင်ဒင်၊ သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၃ (ဒီဓာတ်ပုံကို http://www.mgntoday.com/ ကယူပါတယ်၊ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းနိုင်ခဲ့ပါ၊ မောင်မောင်ကြီးငယ်စဉ် ကျောင်းသားတပ်မတော်ထဲရှိစဉ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များကပုံ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊) မောင်မောင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း...
Aung Din – Peace in Rangoon
(ကိုသန်းဋ္ဌေးမောင်ရဲ့ ပန်းချီကား၊ ခွင့်မတောင်းပဲ ယူသုံးလိုက်ပါတယ်၊) ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး အောင်ဒင်၊ သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၃ (၂၀၁၃ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၈ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး ၂၅နှစ်ပြည့်သို့ ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုခြင်း၊) ရန်ကုန်မှာ...
Aung Din – 30
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၅၅၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (30) အောင်ဒင်၊ ဇူလိုင်...
Aung Din – Regime Parliament (29)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၅၄၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (29) အောင်ဒင်၊ ဇူလိုင် ၂၃၊...
Aung Din – Parliament (28)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၅၃၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၂၈) အောင်ဒင် အပိုင်း...